Amaphrinta e-3d, Umshini we-Laser, i-3d Carving - i-Ecubmaker
4 Amamojula wokuSebenza ashintshanayo
Ijubane Lokuphrinta Eliphezulu & Ukuphrinta Okuphezulu Okuphezulu
Bhala noma yimaphi amaphethini, isithombe, ukwakheka ezintweni ezahlukahlukene
Iphrinta ye-3D ye-TOYDIY 4-in-1
Ukuphrinta kwe-3D enemibala emibili
Ukusingathwa Kwemicu Engaphansi & Akukho Ukuxubeka Kwemibala
Carve, Mill Surface On Izinto Ezihlukahlukene
Ukuqamba okungu-8 Ukuhlangabezana Nezidingo Zakho Ezingenamkhawulo
Sinezici ze-Advance Ozifunayo
Izendlalelo ezine ze-Magnetic Platform Esishisayo
Isoftware ye-4-in-1 Slicing
180x180x180 Usayizi Wokuphrinta
Yini i-TOYDIY 4-in-1 3D Printer Engayenza
Imisebenzi Eminingi, Izinketho Ezengeziwe Zokuhlola
Umphumela we-Spiderman 3D
Ithandwa Umphakathi Wabasebenzisi abangu-5000 +
Ngemuva kokufunda ngamanye amaphrinta futhi ngikwazi ukusebenzisa amanye, ngitshela abantu ukuthi le yiphrinta yokuqala ye-3D yokuqala ukuthola nokufunda.Bese ukhuphukela kuphrinta enkulu uma isikhala sokwakha sincane kakhulu.Ngisisebenzisele injongo yami yebhizinisi lo mshini kakhulu.
Angimdala kakhulu ukuthi ngifunde izinto ezintsha!
I-ToyDIY yami 4 ku-1 isebenza kahle!
Izingalo zeGoPro mount zintekenteke ngokufaka okungu-15% ngakho-ke ngiyikhuphulele ku-50% ... futhi ngiphakamise ithempulethi lokuya ku-210 C.
Ngifunde ukumisa isikhashana ukuphrinta bese ngiqopha isihlenga phansi njengomshwalense owengeziwe wokunamathela embhedeni.
I-laser igqoka ngempela indlu yami eyenziwe nge-iPad.
Nawa amanye amagajethi amancane engihlelile futhi ngawaphrinta: iziqeshana zezintambo zokwengeza ukuze zizibambe ngaphezulu kwerediyetha. Ukutsheka okusha kumelela ikhibhodi yami. Leli puleti elibukeka lihlekisa ubuhlungu bezicubu nokunciphisa ukucindezeleka, uhlikihla iphuzu lobuhlungu ngekhona elifanele lepuleti.
Kudingeka ibhokisi likagesi eliyindilinga, phrinta elilodwa nje. Iphrinta ephrintiwe isihlenga ngombala owodwa ngokuzilayisha nokuzothula intambo yesidingo. Isisekelo se-Magnetic siyamangalisa. Konke kumane kwehlukane kungabikho mzamo.
I-Face Mask isilungile! Ngijabule ukwenza okuthile okuwusizo ngalesi sikhathi.
Uhlelo olusha lwe-laser lwenza ukushisa okuhle nokuhlanzayo! Siyabonga ngohlelo olwenziwe ngcono!
IGoldens Junkyard Farm
Yafika ngokushesha futhi yashiswa. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ngaphezu kwakho konke ngiyakucela kakhulu ngicela ukususa uma ngicabanga ukuthi kungenzeka ngiphuthelwe yikhanda elilodwa lephrinta le-3d futhi ngifisa ukuthi ngabe bekukhona okuningi ngokujula kokufunda maqondana nohlangothi lwesoftware. Ngingeze ukubuyekeza kwami ​​ku-YouTube futhi njengoba ubona inhloko ye-lazer yenza umsebenzi omuhle.
Bang on !! Yize le yiphrinta yami yokuqala ye-3D- angikaze ngihlangane nodaba oluningi kangaka lokuyisebenzisa. Mane uthathe amahora ambalwa ukwazi ngemisebenzi emi-4 ngamunye ngamunye. Kwenziwe konke okuphrintiwe kokuhlolwa ekhadini le-SD. Futhi sengingasho ukuthi kuthulekile ukuhlaba umxhwele.
Ngaphambi kokuya eminye imininingwane bengifuna ukusho ukuthi- ukusebenzela amakhasimende kwabo kwakukuhle. Ngabathinta ngokudideka ngesikhathi sokugaya i-CNC. Futhi baphendula ngomzuzwana ngemininingwane efanele. Umsebenzi omuhle lowo!
Kuze kube manje bengilokhu ngivivinya ukuphrinta okujwayelekile futhi ngiphakathi nendawo nokuphrinta kwamahora angama-30. Iphrinta yafika ngokushesha ivela e-amazon, futhi yayipakishwe kahle. Akukho okonakele ngenkathi ngivula ibhokisi futhi kwakulula ukukhipha impahla. Le nto yayimbozwe ngogwebu ukuvimbela noma yikuphi ukunyakaza, futhi wonke amakhanda ayesongelwa nge-bubble. Kwakulula nokuvula.
Emasontweni ambalwa edlule umngani wami omkhulu kaMolly udlule emhlabeni. Bengifuna ukumenzela isikhumbuzo esincane futhi ngisebenzise yonke imisebenzi emithathu yeToyDIY.
Ngikwazile ukusebenzisa le phrinta ngaphandle kwebhokisi ngaphandle kwezinkinga. Ngikuthengile lokhu ngoFebhuwari ka-2020 ukuze ngikusebenzise kumaphrojekthi esikole. Ngangingazi lutho ngaleso sikhathi mayelana nokuphrinta kwe-3D, i-laser etching noma i-CNC umbhalo.
Ngibe nenkinga inyanga eyodwa noma ngaphezulu ngekhanda lokuphrinta le-3D futhi ngathunyelwa esikhundleni ngokushesha okukhulu.
Inkampani iyashesha ukuphendula imibuzo nezinkinga phakathi nosuku lomsebenzi eChina, ngakho-ke kukhona ukubambezeleka okuncane ngezikhathi zokuphendula. Kepha baphendula ngokushesha becabangela umehluko wesikhathi.
Iphrinta enhle kakhulu! Kuze kube manje kusanda kwenziwa ukuphrinta kwentambo eyodwa, kepha njengamavidiyo, layisha ifayela bese ucindezela inkinobho. Ngokulandelayo ngizozama ukusebenza kwe-laser.
Bengihlale ngifuna iphrinta eyi-3-in-1 (enephrinta ye-FDM, i-CNC eqoshwe, ne-laser engraving) kepha iningi lalemishini ibiza kakhulu. Ngakho-ke lapho ngithola iphrinta ye-4-in-1 eshibhile kakhulu kunezinye, nginqume ukuyithatha ngibone ukuthi ngicabangani ngomshini. Futhi ngijabule kakhulu ngokuthenga kwami.
Iphrinta ye-Ecubmaker 4-in-1 iza ihlanganiswe kahle kakhulu. Kunamabhokisi amancane amancane, anelebula ngaphakathi kwebhokisi elikhulu- ngaphakathi kwalawa mabhokisi ungathola amakhanda wamathuluzi ama-4, intambo, isibambi sentambo, namathuluzi / izingxenye. Ngaphakathi kwebhokisi elikhulu ungathola umzimba wephrinta, osuvele uhlanganisiwe. Le phrinta idinga ukuhlangana okuncane- konke okumele ukwenze ukunamathisela ikhanda lamathuluzi elidingekayo bese uqala ukuphrinta! Ngaphambi kokusebenzisa iphrinta, bengifuna ukubheka ngokujulile iphrinta nokwakheka kwayo.
Ukusetshenziswa kwalo mshini kuningi. Kungakho ngithanda i-3DPrinter yami. Angidingi ukukhathazeka ngomsebenzi o-4 esinawo. Futhi ikhwalithi yaleyo misebenzi muhle impela.
Izici zokulinganisa ngokuzenzakalela zingisiza kakhulu ekubeni nenkinga yokuphrinta. Ipulatifomu ayishisi neze ngenxa yobuchwepheshe obumunca ukushisa. Ngakho-ke ngikwazi ukukhipha kalula ukuphrinta kwami ​​kwe-3D ngemuva nje kokukuqeda.
Futhi into eyodwa ebaluleke kakhulu, ayidingi ukuhlangana, umshini wayo wokuqala wokuhlangana. Kulezi zinsuku mincane imishini enikeza lolu hlobo lohlelo.
Isoftware yokuklama inikeza, futhi icebile kakhulu kokuqukethwe. Ngikwazi ukuhlela kalula noma ukuklama imodeli yami nge-software ye-ecubware.
Ngizoncoma wonke umuntu ukuthi athenge lo mshini, njengoba ushibhile kakhulu ngokuqhathanisa nenqwaba yesici nemisebenzi.
Kusebenze kahle! Yonke into ifike kahle sekukhangisiwe. Kuze kube manje kwenziwe i-Laser eqopha kakhulu futhi uwuthanda ngempela umphumela kusuka kulo mshini omncane. Ngilethe intambo yothingo lwangaphambi kokuba iphrinta yami ithunyelwe. Ngokokuqala ngqá ukusetshenziswa kuthole umphumela omuhle. Ngiyethemba kuningi engizokuthola nokukufunda.
Ufuna iphrinta ye-3d ongayithengela usuku lokuzalwa lendodana yami. Thatha izinsuku ezimbalwa ukunquma futhi ekugcineni ulethe le 4in1. Kuwufanele ngempela! Ngisebenze amasonto ambalwa ukuzama ukuphrinta okungu-3d kanye nelaser amanye amalokhi wami okhuni. Ngithole ukuthi i-laser iyathakazelisa ukuyisebenzisa, yize ngithuthele iphrinta yami egalaji lami ukuthola ukuvikeleka okwengeziwe!
Ngenze iphrojekthi yami yokuqala ngeToydiy 4in1. Ishicilelwe izingxenye eziningana futhi yahlangana ndawonye. Yize ukwehluleka okuthile kungenxa yenkinga yezilungiselelo, kepha ngemuva kwengxoxo encane nokusekelwa kulungisiwe. Kukonke ngiyayithanda le phrinta.
I-Ecubmaker Setha ukufeza iphupho labenzi. Njengomunye wenkampani yokuqala ukuqhubekela phambili ukwenza i-Multi-functional 3D Printer, u-EcubMaker uncome ukuqamba kwawo kanye nekhwalithi esezingeni.
Kusukela ekusungulweni kwethu ngo-2013, Sihlakulela ahlukahlukene izinga okusezingeni ideskithophu iphrinta uchungechunge efana Fantasy. Ngemuva kokuthola impumelelo ochungechungeni lweFantasy inhloso yethu elandelayo bekuwukuthuthukisa okuthile okungahlangabezana nesidingo sabadali abathanda ukuba nomshini ongenza imisebenzi eminingi. Futhi okungonga imali nesikhathi sokushintshela umshini emshinini. Ekugcineni, safinyelela lapho sasihlose khona. Ngo-2019 Sethula iphrinta ye-4-in-1 ye-3D yokuqala emhlabeni ebizwa nge: TOYDIY 4-in-1. Okubandakanya umbala owodwa we-FDM, ukuphrinta okubili kwe-FDM 3D Ukuphrinta, ukuqoshwa kwe-Laser, ukuqoshwa kwe-CNC nezinye izici zobungcweti.
Sinamalungu angaphezu kwangu-10 eqenjini le-R & D. Bonke baphishekela iphupho lokusungula okuthile kubathengi abajwayelekile kumthengi ojwayelekile owengeziwe. Bazimisele ukwenza okuthile okungasetshenziswa ngumfundi waseKolishi. abazali abaphakathi kweminyaka noma ngisho nokuzilibazisa okuthatha umhlalaphansi. I-TOYDIY 4-in-1 iyisibonelo esihle sokufakazela ukuzinikela kwabo. Ukuthuthuka kwesoftware konke okukodwa bekuyinselelo enkulu kubo. Ngemuva kokudlula esigabeni esithile esinzima sakwenza. Njengamanje i-TOYDIY iphrinta ye-3D yamathuluzi amaningi elungiselelwe enqoba abathandi abaningi be-tech inhliziyo.
Ukuqhubeka nalo mnikelo embonini yokuphrinta ye-3D kanye nentuthuko yayo siyathenjiswa ukuthi sizonikela ngamaphesenti ethu ayikhulu. Sisebenzela ukwenza impilo yomsebenzisi ibe lula kakhulu. Sifuna ukuthi uhambe nathi futhi ube ngomunye wethu okholelwa emisha nasekuguqukeni kwesintu.
Amalungelo obunikazi nama-copyright